Fanaanka Bisle Xasan oo muuqaal qurux badan ka sameeyay heesta Qorshe daawo. - iftineducation.com
iftineducation.com – Fanaanka da’da yar ee Bisle Xasan ayaa soo saaray muuqaalka heesta ‘Qorshe’ oo ah hees jeceyl ah, erayada heesta waxaa sameeyay abwaan Qadar Gaas, halka laxanka iyo codka uu saaray Al Fanaan Bise, Musiga macaana waxaa u qaabiyeey Caynba Cayn.
Halkaan ka daawo muuqaalka heesta Qorshe.
Fanaan Bisle ayaa ku raaxeystay heesta si wanaagsana u jilay, waxaana fanaanka laga dareemaayay marka uu erayada heesta ku luqeynayo in ay saameyn ku leedahay isaga, laakiin wuxuu ka dhawaajiyay Bise Xasan inaan heestu isaga quseyn.
Fanaankaan ayaa dar dar lasoo galay fanka wuxuuna soo saaray dhow heesood oo ay ugu dambeyso heestaan Qorshe oo muuqaalkeeda si wanaagsan loo habeeyay.
Bisle Xasan ayaa la dhihi karaa waa fanaan mustaqbal fiican ku leh fanka Soomaaliya hadii uu sidaan kusii socdo. waxaan leenahay hadii aanu nahay bahda shabakada iftinducation.com.com horu mar wacan al fanaan Bise.